९९ प्रतिसत नेपालीलाई सेक्स गर्न आउँदैन: करुणा कुँवर, मनोविज्ञ – – Enayanepal.com
९९ प्रतिसत नेपालीलाई सेक्स गर्न आउँदैन: करुणा कुँवर, मनोविज्ञ –
नाङगो हुनु सेक्सका लागि अनिवार्य जस्तै हो ।
– पुरुष होस् या महिला, सुरुमा उँहाहरु आफ्नो पार्टनरको फलानो स्वभाव ठीक छैन, चिलानो ब्यवहार ठीक गर्देनन् भनेर समस्या लिएरआउँछन् । कुरा गर्दे जाँदा मुल कुरा सेक्समा गएर अड्किन्छ । अर्थात् कुनै पनि युगल जोडीमा केही समस्या छ भने कुनै न कुनै रुपमा त्यो समस्याको जड सेक्स सम्बन्धी उनीहरुको धारण र ब्यबहारमा प्रकट हुने गरेको मेले पाएँ ।
नेपालीको यौन कृयाकलाप कसरी हँुदोरहेछ, समस्या के पाउनुभयो ?
नेपालका शहरी क्षेत्रमा महिला–पुरुष सेक्समा उदार हँुदैछन् , यससँगै सेक्समा बिभिन्न प्रयोग भएको सुन्न पाइन्छ , यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
– विदेशमा विशेषगरी शिक्षित जोडीहरु सेक्समा समान सहभागिता खोज्छन् । कुनै पुरुषलाई मुख मैथुन रमाईलो लाग्छ भने त्यहा महिलाले पनि आफुलाई त्यही रुपमा आप्mनो सन्तुष्टीको आधार खोज्छिन् । यहि कारण महिलाहरु पनि त्यती नै रमाईलो मान्छन् । नेपालमा भने महिलाहरु आफ्नो सन्तुष्टिको अधिकारबारे त्यती सचेत छैनन् । आफ्नो पार्टनरले मुख मैथुन वा गुद मैथुनको बारेमा कुरा गरो भने आफु जर्वजस्तीमा परेको अनुभब गर्छन् । त्यसमाथि उनीहरुको मनमा सेक्स भन्नेवित्तिकै पुरुष लिङग महिला योनीमा जाने कुरा मात्रै मनमा गढेको छ । सेक्समा मन नमिल्नु वा सेक्सप्रती दुवैको एकनासको शिक्षा नहुनु नै समस्याको कारण हो ।
– धरै महिलाको लागि यौन लाजको बिषय हो तर लाजको बिषय भन्दैमा उनीहरु त्यसलाई प्रकट गदैनन् भन्ने होइन । राम्रो गाजल लगाएर वा चिटिक्क परेर आप्mनो–आफनो यौनिकता प्रर्दशन गरिरहेका हुन्छन् ।
(अश्विनी कोइरालाले लेखेको पुस्तक उनीवाट साभार गरिएको हो यो अन्र्तवार्ता । प्रश्न–जवाफमा माहिर मानिने कोइरालाको यो अन्र्तवार्ताले यौनलाई हाम्रो समाजसँग फुत्किनै नसकिनेगरी जोडेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो अन्र्तवार्ता नेपाली समाजको अदृश्य विषयको दृश्य चित्र हो ।
सदावहार यो कुराकानी सान्दर्भिकताको हिसावमा साभार गरिएको हो)
– See more at: http://www.imandarmedia.com/2016/11/antarwarta.html#sthash.PdZz58Ut.9KuwJDo3.dpuf